Isku Aadka Dukaankaygu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud u abuurto sheekooyin yaryar oo firfircoon | Abuurista khadka tooska ah
Ku abuuro sheeko yar oo animated fiidiyow ah barnaamijka Barbaarinta Sheekadayda
Nidaamka hawlgalka ee qalabka moobiilka ee aan ka ogaanno Android, waxaan leenahay barnaamijyo kala duwan oo loogu talagalay naqshadeynta iyo hal-abuurka oo aad u xiiso badan.
Mid ka mid ah waa Draw My Store, oo ah barnaamij maalmo ka hor laga bilaabay Google Play Store, barnaamijka Android iyo dukaanka ciyaarta fiidiyowga. Codsigan ayaa kuu oggolaanaya abuuro sheekooyin yaryar oo firfircoon laga soo duubay fiidiyowyo aad ku duubtay kamaradda taleefankaaga casriga ah. Qalab xiiso badan oo loogu talagalay tafatirka fiidiyowyada oo bilaash ah.
Sawir noloshayda wuxuu leeyahay kanaal YouTube ah taas oo ay ku jiraan soo jeedinno hal abuur oo aad u xiiso badan. Taasina waa sababta barnaamijka Android uu u yimaado inuu uruuriyo qayb ka mid ah habkaas gaarka ah ee muujinta iyo sheegista sheekooyinka.
App ayaa kuu ogolaanaya ku dar sawir gacmeed, qoraallada, sawirrada, sawirrada, muusigga asalka ah ama xitaa beddel xawaaraha fiidiyaha fiidiyowga ama waxa codkaaga ku duuban taleefankaaga. Waad abuuri kartaa fiidiyowyo asal ah si aad ugu noolaatid mid ka mid ah xafladaha dhalashada ee qaar ka mid ah xubnaha qoyskaaga ama aad u abuuri karto cashar yar oo sharraxaya sida qalab ugu shaqeeyo barnaamijka naqshadeynta sida Photoshop.
App waa bilaash ka keydka Play Store oo waxay leedahay waxa loogu yeero micropayments-ka kuu oggolaanaya inaad gasho midabbo gaar ah, burushyo iyo wixii intaa ka sii badan. Qalab naqshad loogu talagalay tafatirka fiidiyowyada aaladda moobaylka sida taleefanka gacanta ee 'Android', oo ikhtiyaar u leh inaad sawir gacmeed ku sawirto waxaad ka sheekeyn kartaa sheekooyinka ka muuqda tallaaladaas aad xulatay maalmaha fasaxa ah ee ku sugaya Easter-kan.
Isku Aadka Noloshaydu waa barnaamij ah ku biiraya kuwa kale oo tayo sare leh waa sidee Bambo Paper kaas oo yimid Android bishii Diseembar ee sanadkii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Ku abuuro sheeko yar oo animated fiidiyow ah barnaamijka Barbaarinta Sheekadayda
'Ilaaha Masar' by Maciej Kuciara
Sawirada cajiibka ah ee Brett Walker